I-Acrestate ye-Trestolone (MENT) i powder (6157-87-5) hplc =98% | I-SASMS i-AASraw
/ iimveliso / Prohormone / I-Trestolone Acetate (MENT) ipowder
SKU: 6157-87-5. Udidi: Prohormone
I-AASraw ihamba kunye nokukwazi ukuvelisa kwi-gram ukuya kwinqanaba le-Trestolone Acetate (MENT) powder (6157-87-5), phantsi komgaqo we-CGMP kunye nolawulo lwekhwalithi ephezulu.
I-Trestolone Acetate (MENT) ipowder yinto enamandla ye-anabolic steroid. Kwakhona kuthiwa yi-7 i-alpha-methyl-19-nortestosterone (i-PENT powder), yinto yokwenza i-stterotic steroid ebonakala yomelele kakhulu emzimbeni, egqithiseleyo amandla ka-testosterone. Kucingelwa ukuba luncedo ngenjongo yokwakha umzimba kunye nokuqeqesha amandla.
Isisindo somzimba: 330.465
Ifom ye-Trestolone Acetate powder (i-CAS 6157-87-5) ithathwa njengendlela ehamba phambili yokuhambisa le steroid ye-anabolic ngelixa iifom zomlomo ziza kuvelisa iziphumo ezinononophelo. Kufuneka kuqatshelwe ukuba umyinge uyingundoqo. Nabani osebenzisa i-Trestolone Acetate powder kufuneka alandele yonke imiyalelo yokulinganisa kwileta ukwenzela ukuba avimbe imiphumo emibi. Isilinganisi esifanelekileyo siza kuzisa neziphumo eziphambili xa zisetyenziselwa ngokuqhubekayo ngaphezu kwexesha elide.
I-AAS eluhlaza ihlinzeka ubumsulwa 98% I-Trestolone Acetate / MENT powder eluhlaza kubakhi bomzimba okanye iilabhu zangaphantsi zokulinywa okanye ukusetyenziswa komlomo.
I-PENT powder Iingcebiso: